UYOSHUWA 15 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
UYOSHUWA 15UYOSHUWA 15
Ummandla owabelwa uJuda
151Nguwo lo umhlaba owabelwa izindlu zesizwe sakwaJuda *ngamaqashiso: Lo mhlaba waya kutsho kumda wase-Edom ezantsi kwentlango. 2Lo mda wangasezantsi wawucanda kwincam engezantsi yoLwandle oluFileyo, 3uhle ubheke ezantsi ukusuka kwiNkalo yooNomadudwana, ugqithele eZin. Wawutyhutyha amazantsi eKadeshe-bhaneya, udlule eHezeron, unyuke usinge eAdare, ujike ujonge ngaseKareka, 4wenjenjeya usinga eAzemon, ugudle intlambo ekuthiwa yeyeJiputa, ujonge elwandle, apho ufika ume khona. Ngumda ongasezantsi wakwaJuda ke lowo.
5Umda wangasempumalanga wawuluLwandle oluFileyo, wenjenjeya uye kutsho apho umlambo iJordan ungena khona elwandle.
Wawuqala apho umda wangasentla, 6unyuke ubheke ngaseBhete-hogela, ubheke entla eBhete-arabha. Wawusuka apho unyukele kwiLitye likaBhohan (uBhohan ngunyana kaRubhen), 7usuke ngakwintili yeAkore, unyukele eDebhiri, uze ujike ujonge emantla ngaseGiligali. IGiligali le yayijonge inkalo yeAdumim esemazantsi omfula lowo. Wawugqithela kwimithombo yase-En-shemeshe, wenjenjeya ukuya e-En-rogele, 8uze unyuke utyhutyhe intili yoonyana bakaHinom esethambekeni lenduli ekwakumi kuyo isixeko samaJebhusi (yiJerusalem ke leyo), usuke apho unyuse intaba, utsho encotsheni ngakwicala langasentshona lentili iHinom ngasentla kumaphethelo entili yamaRafa. 9Usuka apho usinge emthonjeni waseNefetowa, ugqithele kwizixeko ezingakwintaba iEfron. Uyajika apho, ubheke ngaseBhala (oko kukuthi iKiriyati-yarim), 10apho ujikela ngasentshonalanga yeBhala, ujonge kwintaba iSeyire, uphume kwicala elingasentla lentaba iYarim (oko kukuthi iKesalon), uhle uye eBhete-shemeshe, ugqithele eTimna. 11Lo mda wawunyuka uye kwinduli engasentla kwe-Ekron, ujike ujonge eShikeron, udlule intaba iBhala, wenjenjeya ukusinga eYabheneli. Wawuhamba uyokuma ngolwandle 12olwalungumda wangasentshonalanga.
Ngaphakathi kwale mida kwakuhlala abantu bezindlu zikaJuda.
UKalebhi uthimba iHebron neDebhiri
13Inxalenye yommandla wakwaJuda wabelwa uKalebhi unyana kaJefune wesizwe sakwaJuda, ngokomyalelo *kaNdikhoyo kuYoshuwa. Wabelwa iHebron, isixeko sika-Arbha,Okanye “iKiriyati-arbha” uyise ka-Anaki. 14UKalebhi wayikhuphela ngaphandle kweso sixeko inzala ka-Anaki. YayinguSheshayi, uAhiman, noTalmayi.Nkokh 1:20 15Wesuka apho waya kuhlasela abantu ababehlala eDebhiri ekwakusithiwa yiKiriyati-sefere mandulo. 16UKalebhi wathi: “Intombi yam uAkesa ndoyendisela kumntu oya kuze ayihlasele ayithimbe iKiriyati-sefere.” 17UOteniyeli unyana womntakwabo-Kalebhi uKenazi wasithimba ke eso sixeko, waza uKalebhi wayendisela kuye intombi yakhe uAkesa. 18Bakuba betshatile wacenga uOteniyeli amvumele acele umhlaba kuyise. Wehla kwidonki awayekhwele kuyo uAkesa, waza uKalebhi wabuza wathi: “Kwenzeke ntoni?”
19Wathi ukuphendula uAkesa: “Ndicela intsikelelo. Kaloku umhlaba ondinike wona ukwindawo ebharhileyo. Nceda undinike imithombo.” UKalebhi ke wamnika imithombo angasentla nengasezantsi.
20Lo ngumhlaba owabelwe izindlu zesizwe sakwaJuda, waba lilifa lazo:
21Izixeko zabo ezazisemazantsi, ezo zazikufuphi nomda wase-Edom, yayizezi: iKabhezeli, iEdere, iYagure, 22iKina, iDimona, iAdada, 23iKedeshe, iHazore, i-Itenana, 24iZifi, iTelem, iBheyaloti, 25iHazore-hadata, iKeriyoti-hezeron (okanye iHazore), 26iAmam, iShema, iMolada, 27iHazare-gada, iHeshmon, iBhete-pelete, 28iHazare-shuwali, iBheshebha, iBhiziyotiya, 29iBhala, i-Iyim, iEzem, 30iEltoladi, iKezili, iHoma, 31iZikelage, iMademana, iSanesana, 32iLebhawoti, iShilim, iAyin, kunye neRimon. Yaba zizixeko ezimashumi mabini anethoba zizonke, kwakunye neelali ezizingqongileyo.
33Izixeko ezazisesihlanjeni yayizezi: iEshtawoli, iZora, iAshna, 34iZanowa, iEn-ganim, iTapuwa, iEnam, 35iYamuti, iAdulam, iSoko, iAzeka, 36iSharayim, iAditayim, neGedera (okanye iGederotayim). Yaba zizixeko ezilishumi elinesine kunye neelali ezazizingqongile.
37-41Kwakukho nezinye izixeko ezilishumi linantandathu ezazingqongwe ziilali. YayiyiZenan, iHadasha, iMigdali-gadi, iDilan, iMizpa, iYoketeli, iLakishe, iBhozekati, iEglon, iKabhon, iLamam, iKitilishe, iGederoyi, iBhete-dagoni, iNama, kunye neMakeda.
42-44Kanti ke kwakukho nezinye izixeko ezilithoba ezazingqongwe ziilali: iLibhena, iEtere, iAshan, i-Ifeta, iAshna, iNezibhi, iKeyila, iAkezibhi, kunye neMaresha.
45IEkron yayingqongwe zizixeko kunye neelali, 46kukho nezinye izixeko neelali ngaseAshdode, ukusuka e-Ekron kuse elwandle.
47Yayikwalapho iAshdode kunye neGaza kwanezixeko neelali zazo, zithe thande de kuye kuthi xhaxhe kwintlambo ekuthiwa yeyeJiputa nakunxweme lolwandle.
48Izixeko zeleentaba yayiyiShamire, iYatire, iSoko, 49neDana, iKiriyati-sana (okanye iDebhiri), 50iAnabhi, iEshtemo, kunye neAnim, 51iGoshen, neHolon, kunye neGilo. Yayizizixeko ezilishumi linambini zizonke kunye neelali ezizingqongileyo.
52YayiyiArabhu, iDuma, iEshan, 53iYanim, iBhete-tapuwa, iAfeka, 54iHumta, iKiriyati-arbha (yiHebron ke leyo), kunye neZiwore, izixeko ezilithoba kunye neelali ezizingqongileyo.
55IMawon, iKarmele, iZifi, neJuta, 56kunye neYizereli, iYokedim, neZanowa, 57iKayin, neGibheya, kunye neTimna, izixeko ezilishumi zizonke kunye neelali ezizingqongileyo.
58IHalehule, neBhete-zure, iGedore, 59neMarati, kunye neBhete-anoti ne-Eltekon, yayizizixeko ezithandathu kunye neelali ezizingqongileyo.
60Kwakukho neKiriyati-bhali (okanye iKiriyati-yarim) kunye neRabha: izixeko ezibini neelali ezizingqongileyo.
61Entlango kwakukho iBhete-arabha, iMidin, iSekaka, 62iNibheshan, isiXeko seTyuwa, kunye ne-Engedi: zazizithandathu kunye neelali ezizingqongileyo.
63Kodwa ke kambe amaJuda akazanga aba nako ukuwagxotha amaJebhusi awayemi eJerusalem. Asahlala apho nangoku kunye noonyana bakaJuda.Nkokh 1:21; 2 Sam 5:6; 1 Gan 11:4